Ọkara nke ụlọ ọrụ ndị a gbara agba agba nwere Peeji Google+ | Martech Zone
Ọkara nke ụlọ ọrụ akpọrọ nwere Google+ Page
Satọde, Febụwarị 18, 2012 Douglas Karr
Anyị gbara ọsọ a Ntuli aka Zoomerang na sidebar anyị maka izu ole na ole gara aga iji nweta nkọwa doro anya banyere ọtụtụ ụlọ ọrụ ejirila ibe Google+. Nsonaazụ nghoputa ahụ bụ nkewa zuru oke… naanị 50% nke ndị na - agụ akwụkwọ kwuru na ụlọ ọrụ ha nwere peeji Google+. Ọ bụ ezie na nke ahụ nwere ike iyi obere, echere m na ọnụọgụ ọnụọgụ nwere ike ịdị obere. Enwere m enweghị nchekwube na ọtụtụ nwere ha.
Ka anyị na-achọ ndị asọmpi nke ndị ahịa anyị, anyị anaghị ahụkarị ha na Google+ ma nke ahụ bụ otu n'ime ihe mere anyị ji gbaa ha ume ịnọ ebe ahụ. A bụ ihe atụ nke onye ahịa anyị, Lifeline, ndị nwere nnukwu data center na midwest. VP nke Ahịa ha na-ewepụta ọdịnaya mgbe niile ma na-adọta ezigbo ndị na-eso.
Ahụmịhe anyị egosila anyị na nnabata mbụ emeela ka anyị nwee uto ngwa ngwa ma a bịa n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ bụchaghị na ị ga - emeri n’ọgụ taa… mana ọ bụrụ na mgbe mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga - ebido, ikuchi gị emeela ka ị bụrụ onye ndu ebe ahụ. Na Google+, mgbe m na-achọ ebe data, enwere naanị nsonaazụ ole na ole. Nke mbụ bụ Lifeline, nke ọzọ bụ ụlọ ọrụ na-ewu datacenter, nke ikpeazụ bụ ụlọ ọrụ Canada Data Center.
Nke ahụ bụ nnukwu akụkọ maka Doug na ndị otu ya na Lifeline. Enweelarị nde ndị ọrụ na Google na ọtụtụ n'ime ha na-emepụta netwọkụ ha. Ebe ọ bụ na enweghị asọmpi, Doug nwere ike ijide ụfọdụ ndị na-eso ụzọ oge mbụ na ọ nwere ike ọrubeghị tupu ọ kụọ ọkọlọtọ ya n'ime ala dị ka onye na-eche echiche n'ihu, ọkachamara Data Center nwere njikọ chiri anya. Nke a bụ ebugharị ebumnuche nke nwere ike idozi ndụ na ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụchaghị usoro nke nwere nloghachi na nkwụghachi ego.
Ched nyochala mpi gị na Google+? Ndị na-asọmpi gị ugbua ịtọlite ​​ụlọ ahịa na ụlọ ikike na netwọkụ mmekọrịta a nwere nnukwu ọ andụ ma nwee ike inye Facebook ego otu ụbọchị? Have ga-echeta na ọ bụghị banyere ị, ọ bụ ihe ebe ndị na-ege gị ntị nọ. Doug achọtala ụfọdụ ndị na-ege ya ntị na Google+. I kwesiri iche echiche banyere ịchọta nke gị ebe ahụ!
Tags: ebe googlegoogle plusgoogle tinyere peejigoogle +
Gịnị bụ onye edemedeRank na ihe kpatara ya
Ntuziaka 3 maka Emailmepụta Email-Mobile Njikere